Antananarivo, 12 Jona 2020
Amin'ity andro 12 jona ity, isika dia miaraka mankalaza amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny Asa na OIT « Ny Andro manerantany hanoherana ny fampiasana ankizy ». Ny lohahevitra nofidiana tamin'ity taona ity dia ny hoe : « COVID-19 : Arovantsika ny ankizy amin'ny fampiasana azy ireo, mihoatra lavitra noho izay nisy hatrizay. »
Ny Andro maneran-tany hiadiana amin'ny fampiasana ankizy amin’ny taona 2020 dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fiantraikan'ity krizy ankehitriny ity amin'ny fampiasana ankizy.
Raha ny voalazan'ny OIT, ny krizy dia mety hanosika ankizy marefo an-tapitrisany hiditra amin’ny sehatry ny asa. Araka ny tombatombana dia ankizy 152 tapitrisa eo ho eo no efa voatery niasa, ka 72 tapitrisa amin'izy ireo no manao asa mampidi-doza. Ireo ankizy ireo noho izany dia ahiana hiatrika toe-javatra sarotra kokoa sy andro fiasana lava kokoa.
Amin'ity taona ity, ny fankalazana ilay Andro iraisam-pirenena dia hiendrika fanentanana virtoaly ary voarindra miaraka amin'ny “Diabe maneran-tany hanoherana ny fampiasana ankizy” (Marche mondiale contre le travail des enfants) sy ny “Partenariat international pour la coopération sur le travail des enfants dans l’agriculture” (IPCCLA).
Misy antontan-taratasy iraisan'ny OIT-UNICEF momba ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny fampiasana ankizy, izay handinika ny sasantsasany amin'ireo fantsona lehibe mety hisy vokany amin'ny fandrosoana mankany amin'ny famongorana ny fampiasana ankizy.
Madagasikara dia mpikambana ao amin'ny OIT nanomboka ny taona 1960, ary amin’izao fotoana izao, eo ambany fiahian'ny Fanjakana Malagasy, ny fanamby faha-85 amin’ny tetika stratejika faha-7 ao anatin’ny IEM (Initiative Emergence Madagascar) dia taratry ny fahavononan’ny firenentsika amin'ny fahatratrarana ny Tanjon’ny Fampandrosoana Maharitra (ODD 2030), tanjona faha-8 – tarigetra faha-7. Izany dia mandrisika antsika handray fepetra « haingana sy mahomby mba hahazoana antoka momba ny fandràrana sy fanafoanana ireo endrika ratsy indrindra amin'ny fampiasana ankizy, hanafoanana ny asa an-terivozona, ary amin'ny taona 2025, hamongorana ny fampiasana ankizy amin'ny endriny rehetra, ka ao anatin'izany ny fandraisana ankizy ho mpiasa sy ny fampiasana azy ireo ho miaramila. »
Ny krizy ara-pahasalamana, ara-toekarena ary ara-tsosialy ankehitriny dia misy fiantraikany amin'ny tsenan'ny asa miaraka amin'ireo vokany ara-tsosialy rehetra mifandraika amin’izany. Noho izany, ny fepetra hanalefahana izany fiantraikany izany amin'ny fampiasana ankizy dia ho ampidirina ao amin'ny drafitr’asa iraisan-tsehatra izay efa eo an-dalam-pamolavolana ankehitriny. Ahitana ny fandraisan’anjaran’ny sampan-draharaharaha ao amin’ny ministera, mpisehatra eto an-toerana sy avy any amin’ny faritra, ary koa ireo fikambanan'ny Firenena Mikambana voakasik'izany io drafitr’asa io.
Tamin'ny volana oktobra 2018, i Madagasikara dia nijoro ho firenena mpisava lalana teo anivon’ny Alliance 8.7, izay sehatra fiaraha-miasa eo amin'ny ambaratonga manerantany sy nasionaly. Izy io dia mampivondrona mpisehatra ara-panjakana, fikambanan’ny mpampiasa, fikambanan'ny mpiasa, fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena ary ireo masoivohon’ny Firenena Mikambana tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fanandevozana maoderina, fanondranana olona, ary ny fampiasana zaza, toy ny OIT sy ny UNICEF.
Amin’izay sehatra izay, misy ny fanadihadiana mikasika ny zava-misy ankehitriny momba ny fampiasana ankizy any amin'ny tanàn-dehibe maro, ary ny valin’izany dia hivoaka tsy ho ela.
Torak'izany koa, ny fijerena ifotony dia natao ihany koa mba hitsirihana ireo ankizy miasa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana, ny fitrandrahana vato, ny fanamboarana biriky, ny fivarotan-tenan’ny ankizy, ny asa an-trano ary ny toeram-pitrandrahana. Izany no natao dia mba hamaritana ny hetsika mivaingana izay hatao momba ireo ankizy ireo sy ireo sehatra ireo.
Tsara marihina fa eto Madagasikara dia 32% amin'ireo ankizy miasa 5 ka hatramin'ny 17 taona dia ao anatin'ny sehatra mampidi-doza, izay manala ny zon’ny ankizy amin'ny fahazazany, ny fahaiza-manaony sy ny fahamendrehany ary manimba ny fianarany, ny fahasalamany, ary ny fitombony ara-batana sy ara-tsaina.
Hetsika maro no notontosaina tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny OIT sy ireo mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola, entina hamongorana ity zava-doza eto amin'ny firenena ity, saingy mbola betsaka ihany ny ezaka tokony ho tanterahina.
Ohatra iray lehibe amin’ny ezaka efa natao ny tetikasa SAVABE izay notanterahan’ny OIT (Soutenir les Acteurs de la Vanille au Bénéfice des Enfants), ary novatsian'ny USDOL vola, mba hiadiana amin'ny fampiasana ankizy eo amin'ny sehatry ny lavanila.
Ankoatr'izay, eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana eladrano (mica) any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara, ny fandraisan’andraikitry ny Governemanta Malagasy dia mizotra mankany amin’ny fanafoanana ny fampiasana ankizy amin’io sehatra io. Eo andalam-pamolavolana ny drafitr’asa iraisan-tsehatra mikasika ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena ny Fanjakana amin’izao fotoana izao. Miara-mientana amin’izany ny ministera isan-sokajiny, ny mpisehatra eo an-toerana sy any amin’ny faritra, ary koa ireo masoivoho manokana ao amin’ny Firenena Mikambana voakasik'izany, toy ny OIT sy ny UNICEF.
Ity Andro iraisam-pirenena hanoherana ny fampiasana ankizy ity dia fotoana tsara indrindra ho an'i Madagasikara, entina manavao ny fanekeny mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra faha-8, eo amin’ny tarigetra faha-7. Natao izany mba entina manentana ihany koa ireo mpisehatra rehetra amin’ny fiarovana tsaratsara kokoa ny ankizy amin’ny COVID-19 any amin'ny toeram-piasana eken’ny lalàna Malagasy. Madagasikara dia maniry ny ho lasa firenena sangany ahitana vokatra azo tsapain-tanana amin’izany ady izany afaka taona vitsivitsy.
Ity fanambaran'ny telo tonta ity, eo anatrehan’ireo mpiara-miombon’antoka, izay soloin’ny OIT sy UNICEF tena, dia hanamarika ny fankalazana ny andro hanoherana ny fampiasana ankizy, izay taona miavaka ho an’i Madagasikara. Ho entanina amin’izany ireo mpisehatra rehetra eo anivon’ny vondrom-piarahamonina mba hiara-misalahy ho fiarovana ny ankizy amin’ny fampiasana azy ireo sy hanamafy ireo hetsika mba hanatratrarana izany tanjona izany.
Hamaranana izao fanambarana izao, dia te hanentana ireo Malagasy rehetra hatrany izahay, indrindra fa ny ankizy, mikasika ny fanajana ireo hetsika sakana amin’ny COVID19 : manasà tanana matetika amin'ny rano madio sy savony, manaova aro-orona sy vava amin’ny fomba tena izy, ary manajà ny elanelana 1 ka hatramin'ny 2 metatra.
«Ndao isika hiaro ny zanatsika amin’ny fampiasana azy ireo, mihoatra lavitra noho izay nisy hatrizay. »